Edere site Tranquillus | Nov 19, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
A ga-akwụ gị ụgwọ maka oge ọ bụla ị rụrụ ọrụ. Akwụkwọ nkwụnye ụgwọ gị ga-egosi awa ole ị rụrụ na ego ole akwụ gị. Ma, mgbe ụfọdụ, onye were gị n’ọrụ na-echefu ịkwụ ha ụgwọ. I nwere ikike ighazuta ha. Maka nke a, ọ ga-adị mma ka ị zipụ leta ndị ngalaba metụtara metụtara ka ha rịọ ka ha dezie ya. Ndị a bụ ụfọdụ akwụkwọ ozi iji rịọ ịkwụ ụgwọ.
Detailsfọdụ nkọwa na gbasaa
A na-ahụta oge awa ọ bụla onye ọrụ were n’ọrụ nke onye were ya n’ọrụ dịka oge ọrụ. N'ezie, dị ka Usoro Ọrụ si kwuo, onye ọrụ ga-arụ ọrụ 35 awa kwa izu. E wezụga nke ahụ, a na-eme ka onye were ya n'ọrụ mụbaa.
Agbanyeghị, mmadụ ekwesighi ịmegharị oge na mgbefe. Anyị na-atụle oge ma ọ bụ onye ọrụ na-arụ ọrụ oge. Na onye achọrọ ka ọ rụọ ọrụ awa karịa oge ekwuru na nkwekọrịta ya. Dị ka agbakwunye awa.
N'ebe ndị a na-atụle oge ọrụghị?
Odu mme idaha oro owo m takenkereke iban̄a ini ebe. N'ọnọdụ a, onye ọrụ enweghị ike ịrịọ ịkwụ ụgwọ maka mmụba ọ bụla. Ndị a gụnyere awa ndị ị ga-ekpebi ime n'onwe gị. Enweghị arịrịọ n’aka onye were gị n’ọrụ. You nweghị ike ịhapụ ọkwa gị ka elekere abụọ gachara kwa ụbọchị. Mgbe ahụ rịọ ka a kwụọ gị ụgwọ na ngwụcha ọnwa.
Mgbe ahụ, enwere ike ịkọwa oge ọrụ gị site na nkwekọrịta ọnụego a kara aka, na-eso nkwekọrịta nkwekọrịta gị na ụlọ ọrụ gị nwere. Ka anyị were ya na oge izu a na-enye kwa izu maka ngwugwu a bụ awa 36. N'okwu a, a naghị echebara ihe ndị karịrị ya echiche, n'ihi na a gụnyere ha na ngwugwu.
N'ikpeazụ, enwekwara ikpe ebe a ga-eji oge nkwụghachi ụgwọ gbanye oge, yabụ ọ bụrụ na inwere ya. Gaghị atụ anya ihe ọzọ.
Kedu otu esi egosi ịdị adị nke oge akwụghị ụgwọ?
Onye oru nke choro ime mkpesa banyere oge a na-akwughi ego nwere ohere ichikota akwukwo nile nke nyere ya aka ikwado aririo ya. Iji mee nke a, ọ ghaghi ịchọpụta oge ọ na-arụ ọrụ wee chọpụta ọnụọgụ oge ọrụ karịrị nke esemokwu ahụ metụtara.
Ozugbo enyochachara ihe niile. Nweere onwe gị igosi dị ka ihe akaebe nke ndị ọrụ ibe gị, onyunyo vidiyo. Usoro ihe omume na-egosi oge igafe gị, ihe elektrọnik ma ọ bụ ozi SMS nke na - egosi mmekọrịta gị na ndị ahịa. Mbipụta nke ederede kọmputa, ndekọ nke oge. Ihe niile a ghaghi esonye ya na akuko banyere oge igafe.
Banyere onye were gị n'ọrụ, ọ ghaghị idozi ọnọdụ ahụ ma ọ bụrụ na arịrịọ gị ziri ezi. Na obodo ụfọdụ ị ga-alụ ọgụ kwa ọnwa. Enweghị enyemaka gị, a ga-echefu ịkwụ ụgwọ oge igafe.
Etu esi aga n'ihu na mkpesa maka akwụghị ụgwọ oge ị gafee?
Oge igafe nke ndị ọrụ na-arụkarị bụ maka mkpa na ọdịmma nke azụmaahịa ahụ. Yabụ, onye were gị n'ọrụ nke na-ewere na ọ na-ewute ya site na ịkwụghị ụgwọ oge ọ gafefe nwere ike itinye akwụkwọ ka ọ bụrụ onye ọrụ ya.
Enwere ike ịgbaso ọtụtụ usoro iji nweta nzaghachi dị mma. Na mbu, o nwere ike buru oru nke onye were ya n’ọrụ. N’ihi ya, a ga-edozi okwu a ngwa ngwa site n’ide akwụkwọ edemede iji kọwaa nsogbu gị. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na onye were gị n’ọrụ akwụ ụgwọ iji gị ụgwọ. Ekwesịrị ịme ka arịrịọ a site na akwụkwọ ozi edebanyere na nnabata nke nnata.
GỤỌ Ndepụta akwụkwọ ozi iji kwuo ụgwọ nke ụgwọ ọrụ gị na-akwụghị ụgwọ
Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ achọghị ka idozi ọnọdụ ahụ, mgbe ị natara akwụkwọ ozi gị. Kpọtụrụ ndị nnọchi anya ndị ọrụ ka ịgwa ha gbasara okwu gị wee chọọ ndụmọdụ. Dabere na oke mmebi gị na mkpali gị. Ọ ga-adị gị n'aka ịhụ ma ị ga-aga n'ụlọ ikpe ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị kwụsị ọrụ mgbakwunye. Na-arụ ọrụ karịa iji nweta otu, ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ.
Akwụkwọ ndebiri maka arịrịọ ịkwụ ụgwọ oge
Nke a bụ ụdị abụọ ị nwere ike iji.
Ihe nlereanya mbụ
Isiokwu: Arịrịọ maka ịkwụ ụgwọ oge mgbe
Dịka onye ọrụ ebe ọ bụ na [ụbọchị ịgbazinye ọrụ] na post nke [post], arụrụ m ọrụ [ọnụọgụ nke oge ọrụ karịrị oge] site na [ụbọchị] ruo [ụbọchị]. Ihe a niile iji nye aka na mmepe ụlọ ọrụ na imezu ebumnuche kwa ọnwa. Emechara m gafere awa iri atọ na ise, oge ọrụ iwu kwadoro kwa izu.
N’ezie, mgbe m natara akwụkwọ ego m na-akwụ maka ọnwa nke [ọnwa m mehiere m] wee gụọ ya, achọpụtara m na awa ndị a anaghị agafeta.
Nke a bụ ihe kpatara m ji hapụ m ka m zitere gị nkọwa na-achịkọta oge m ji arụ ọrụ n'oge a [tinye akwụkwọ niile na-egosi oge ọrụ gị ma na-egosi na ị na-arụ ọrụ oge karịa].
Ọ ga-amasị m ichetara gị na na ndokwa nke edemede L3121-22 nke Usoro Ọrụ, a ga-abawanye oge niile. O di nwute, nke a abughi ikpe banyere ugwo m.
Ya mere, a na m arịọ gị ka itinye aka ka ọnọdụ m wee nwee ike mezie ngwa ngwa.
Na-echere nzaghachi n'aka gị, biko nabata, Madam, ekele m.
Akwụkwọ ozi edebanyere na nnabata nke nnata
Dịka akụkụ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ebe ọ bụ na [ụbọchị ọrụ] na post nke [post], enwere m nkwekọrịta ọrụ nke na-ekwu banyere oge ọrụ kwa izu nke anaghị agafe 35 awa. Agbanyeghị, a natara m ụgwọ ọnwa m, ọ tụrụ m n'anya na anaghị etinye oge m ga-eji rụọ ọrụ.
N'ezie, n'ọnwa nke ọnwa ahụ, arụrụ m ọrụ [ọtụtụ awa] oge ime mgbe Madam [aha onye nlekọta ọrụ] rịọrọ ka m wee nwee ike mezuo ebumnobi nke ọnwa ahụ.
Ọ ga-amasị m ichetara gị na dịka Usoro Ọrụ, m kwesịrị ịnata mmụba nke 25% maka awa asatọ mbụ na 50% maka ndị ọzọ.
A na m arịọ gị ugbu a ka ị jiri nwayọ mee ka m kwụọ ego ahụ eji m.
Mgbe ị na-ekele gị tupu oge eruo maka itinye aka gị na ọrụ njikwa ego, biko nara, Sir, nkwupụta nke echiche m kachasị elu.
Budata “Premier-modele.docx”	Premier-modele.docx - Ebudatara ugboro 7715 - 20 KB
Budata “Deuxieme-modele.docx”	Deuxieme-modele.docx - Ebudatara ugboro 7210 - 20 Kb
Akwụkwọ ozi leta iji rịọ maka ịkwụ ụgwọ maka oge January 8th, 2022Tranquillus
gara agaCovid-19: a na-ewepụ oge nchere maka nkwụsị ọrụ ụfọdụ
-esonụNtughari France | Mwepụta nke ikpo okwu "1 onye na-eto eto, 1 ngwọta"